Saldhig Uu Mareykanka Ku Leeyahay Ciraaq Oo Weerar Gantaallo Ah Lagu Qaaday – somalilandtoday.com
Saldhig Uu Mareykanka Ku Leeyahay Ciraaq Oo Weerar Gantaallo Ah Lagu Qaaday
(SLT-Baqdaad)-Saldhig ku yaalla waqooyiga magaalada Baghdad oo ay degan yihiin ciidamada Mareykanka ayaa shalay gelinkii dambe lagu garaacay gantaallo, waxaana halkaas ku dhaawacmay afar askari oo Ciraaqi ah.
Illaa iyo hadda lama yaqaan khasaaraha weerarka kasoo gaadhay ciidamada Mareykanka, haddii ay jiraan.
Weerarkan ayaa yimid maalmo kadib markii Iran ay gantaallo ballistic ah ku garaacady laba saldhig oo ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Iraq, inkasta oo aysan wax khasaare nafeed ah kasoo gaarin ciidamada Mareykanka
“Saddex askari oo Iraqi ah oo ilaalo ka ahaa albaabka saldhigga ayaa dhaawacmay.” Waxaa sidaas yidhi Colonel Mohammed Khalil oo ah sarkaal ka tirsan booliska gobolka waqooyi ee Saladin.
Illaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas’iiliyadda weerarka. Hase yeeshee waxaa la rumeysan yahay inay ka dambeeyaan kooxaha hubeysan ee Shiicada Iraq, oo ku xidhan Iran.